Samsung yakazivisa yayo 2021 mhuri yemidziyo, ine iyo Galaxy S21 yakateedzana. Pakutangisa iyo inosanganisira yakajairwa Galaxy S21, iyo yakati kurei S21 + uye pakupedzisira iyo Galaxy S21 Ultra kumusoro kwemuti.
Nhare nyowani dzinotangwa pane Imwe UI 3.1, yakagara paApple 11 uye inounza hupfumi hwezvinhu zvevashandisi veSamsung - mamwe auchamboona, mamwe auchasangana nawo kekutanga. Hechino chakadzama gwara kuti iwe uzive nefoni nyowani.
Samsung Galaxy S21 yepamusoro chipikiri: Kana iwe uchinetseka kutsvaga zvinhu, Rova pasi pasi nekukurumidza marongero uye iwe unowana yekutsvaga sarudzo kumusoro. Ingo tanga kunyora zvawatsvaga uye izvi zvinotsvaga kwese kwese kudzosera mafoni, maapplication, vanofambidzana, kugadzwa kwekarenda. Izvo zvine simba chaizvo. Iwe unogona zvakare kuitangisa nekuunza iwo maapplication tireyi, uye nekugogodza yekuwana bar kumusoro.
Maitiro ekudzima kana kudzosera iyo Samsung Galaxy S21: Samsung yakagadzirisa kiyi yepadivi paS21 - sezvayakaita paS20 - saka muchina wekudhinda wakareba uchaburitsa Bixby nekukasira, pane kudzima mudziyo se (dzinenge) imwe nhare dzese pasi pano. Kuti ubvise foni, tsvedza pasi yekukurumidza masetani pane uye tora iyo simba icon ipapo. Ipapo unogona kudzima foni. Pane iyo skrini zvakare ipfupiso kune yekumusoro kiyi marongero kuti iwe ugone chinja basa kana uchida.
Samsung Galaxy S21, S21 +, S21 Ultra yekumusoro screen screen matipi
Iyo yekumba skrini chikamu chekutanga. Ndiko kwaunovhurira foni yako, iyo nzvimbo yekushandisa mapfupi kana mawijeti, uye kwaunodzoka kana wapedza kuita chimwe chinhu muapp.
Vhura Android 11 gesture navigation: Nekutadza iyo S21 ichapa Samsung matatu matatu ma icon ekufamba. Kana iwe uchida kuchinjira kuApple 11's gestures yakavhurika marongero> kuratidza> yekufambisa bar. Pano iwe une sarudzo yemabhatani kana swipe mitezo. Unogona kubaya pane "zvimwe zvingasarudzwa" kuti ushandise, asi nekutsveta zvimiro foni yako inozokurega uchitsvedza kubva kudivi kuti udzokere, kumusoro kubva pasi kuenda kumba, kungofanana nemamwe madivayiri eApple.
Maitiro ekuwana Google Discover: Chimwe chezvinhu zvitsva zvinosvika neUni UI 3.1 ndeyekuwana Google Discover, iyo iwe yaunogona kuwana kuruboshwe rwechidzitiro chekumba. Kana isipo, pfuurira kwenguva refu pachikwangwani chemba uye shandura kurudyi kuti uwane peji rekuruboshwe. Pano iwe uchaona sarudzo yekuve neGoogle Discover, Samsung Yemahara kana kudzima iri peji zvachose. (Kutumidza mazita kunogona kunge kwakasiyana munzvimbo dzakasiyana, isu takaona Upday, Samsung News, Bixby Imba uye zvimwe zvinhu munzvimbo iyi zvisati zvaitika.)
Gadzirisa mamiriro ebha: Iyi ndiyo ruzivo inogara pamusoro pechidzitiro. Musoro muzvirongwa> notices> advanced advanced settings> status bar uye une dzimwe sarudzo. Unogona kugumira kumatatu ekuzivisa, kana iwe unogona kuva nezvose. Iwe unogona zvakare kubatidza kana kudzima iro bhatiri muzana.
Delete folda: Kana iwe usisiri kuda dhairekitori, pinda uye bata uye rova ​​Bvisa. Iyo dhairekitori uye mapfupi mapurogiramu anozopera.
Ratidza mazano eappu mumaapps apfuura. Paunobaya bhatani rezvazvino reapplication, kana zvishoma nezvishoma swipe kumusoro kana uri kushandisa Android 10 maekisesaizi, iwe unowana zvigunwe zvemapeji ako epurogiramu eazvino, asiwo mutsetse wemapurogiramu akapihwa pasi pazasi Izvi zvinoenderana nezvinoonekwa neGPS S21 iwe zvaungangoda zvichibva pamaapps achangobva kushandiswa. Kana iwe usiri kuda izvi, saka vhura menyu kumusoro kurudyi mubhawa rekutsvaga uye kudzima "zvinokurudzirwa maapplication".
Sarudzo dzekubatanidza pane iyo Galaxy S21
Pane zvakawanda zvekubatanidza sarudzo, dzimwe dzaungatomboziva nezvadzo pane iyo S21.
Maitiro ekuseta eSIM: Kana eSIM yakagoneswa pane chako chishandiso, iwe unozokokwa kumisikidza iyi paunotanga kuseta iyo kifaa. Kana uchida kuzviita mushure mekutanga kwekumisikidza, tungamira muzvirongwa> zvinongedzo> SIM kadhi maneja> wedzera nhare mbozha. Izvi zvinokutendera kuti umise eSIM yako.
Mashandisiro aungaita Samsung DeX: Iyo desktop ruzivo (DeX) ndeyeyakajairwa chimiro pane iyo Galaxy S21 inobvumidza iwe kushandisa foni yako sedeskop komputa kungave kuburikidza nePC kana neTV kana kuona. Kutanga iwe uchafanirwa kuvhura DeX parunhare mumasetingi> epamberi maficha> Samsung DeX. Paunenge iwe uchinge waishandura iyo, iwe uchafanirwa kudaro gadza iyo Samsung DeX app paPC yako kana iwe uchafanirwa kubatanidza iyo yekutarisa kune yako foni kuburikidza ne USB-C yekubatanidza pazasi. Ichashanda zvakare kuburikidza neUSB-C hubs.
Kugadzirisa vabatsiri vako veDigital paGPS S21
Dzima Google Mubatsiri / vese vabatsiri: Kana iwe usiri kuda Google Mubatsiri pane iyo yekumusoro bhatani nzira, unogona kubvisa kugona kuivhura. Musoro muzvirongwa> maapplication uye sarudza default maapplication kumusoro kwepeji. Wobva watungamira mu "Dhijitari mubatsiri app" uye "Chishandiso chekushandisa app" pane rinotevera peji. Iwe zvino uchaona sarudzo yekusarudza "hapana". Tinya sarudzo iyoyo uye hapana chinozoitika nemuchina murefu pabhatani repamba kana kana iwe ukasvetuka kubva kumakona.
Govera bhatani rorutivi: Hapasisina bhatani reBixby senge yapfuura maGPS S mamodheru, pachinongova nebhatani rimwe chete. Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> padivi kiyi. Pano iwe unowana zvese zvasarudzo zveiyo kiyi yepadivi, kuti ugone kubvisa Bixby, unogona kuiisa kuti idzime foni nefoni refu, kuvhura kamera neiri kudhindisa kana kuvhura app yesarudzo yako. Chaizvoizvo, iwe sarudza.
Samsung Galaxy S21 inokurumidza kurongedza matipi uye manomano
Kukurumidza kuwana kuGoogle Kumba kudzora: Izvi zvakafanana nePixel's simba menyu menyu smart kumba kutonga. Kana iwe uine Google Kumba yakaiswa uye kumisikidzwa, donhedza nekukurumidza maseturu menyu uye wobva wadzvanya 'Midziyo'. Zvino bata iyo inodonhedza menyu sarudzo iyo inoti 'SmartThings', uye iwe unofanirwa kuona 'Kumba' senge sarudzo. Sarudza izvo uye izvozvi uchaona makuru eescreen widget zvinodzora zveako Google Kumba zvakabatana zvishandiso.
Pakarepo pinda iyo inokurumidza kurongedza uye chiziso pane pane yako skrini yekumba: Rova pasi pasi chero pahwindo repamba uye paziso rezaziso rinotsvedza pasi zvichireva kuti haufanire kutambanudzira kumusoro kwepamusoro peji, tsvaira pasi zvakare uye unowana marongero anokurumidza - anobatsira chaizvo pane yakakura Galaxy S21 + uye S21 Mafoni ekupedzisira. Izvi zvinodzimwa nekutadza, kuti ubatidze paye refu pikicha uye sarudza "yekumusoro skrini masetani", wozo "swipe pasi kuitira ziviso pani".
Gadzirisa nekukurumidza zvigadziro: Kuti uchinje mapfupi aunoona kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita, tsvaira pasi kaviri kuti uone gridhi izere, vhura menyu nekutepa matatu aya uye wosarudza "mabhatani ekugadzirisa". Iwe unozoratidzwa irwo rwakazara runyorwa rweasarudzo pamapeji. Unogona kudhonza kuti uorder zvekare, kana kubvisa mapfupi ausingade. Nzvimbo yepamusoro: chete matanhatu maapp ekutanga anoratidzwa mune kompakiti ekuona kumusoro, saka gadzira aya ekutanga marongero mapfupi.
Kurumidza kugadzirisa chimiro chinopenya: Samsung inoita kuti iwe upinde kupenya kuburikidza nekukurumidza maseteni epaneru, ingo shandura pasi uye iwe uchaona inotsvedza. Kana iwe uchida kugadzirisa autobrightness, rova ​​pasi museve kurudyi-ruoko kumagumo kweslider uye ichakutora iwe wakananga kuenda kune iwo marongero, kwaunogona kuibatidza kana kudzima. Kana iwe uchida kutsvedza pamusoro pezviziviso (saka zviri nyore kusvika pauri), unogona kuzviita izvo mumenu yekumhanyisa mapaneru marongedzero sezvakataurwa muzano riri pamusoro.
Samsung Galaxy S21 uye S21 + app matipi
Ratidzai mapurogiramu ese ari pane yekuvhara kumba: Iyi sarudzo yakakurumbira kune vamwe. Kana iwe uchida kubvisa maapplication tray, pfuurira kwenguva refu pachiratidziro chemumba uye pombi maseturu. Wobva wasarudza "dhizaini yepamba" uye iwe uchaona maviri sarudzo, "yekumba skrini chete" kana "imba uye maapplication skrini". Iyo yekutanga inobvisa maapplication tray zvachose, seiyo iPhone.
Wedzera kana bvisa bhatani rebhatani reapps: Nokutadza hapana maapplication tray bhatani uye iwe unovhura iwo maapplication tray neswipe. Kana iwe uchida kuti bhatani ridzokere musoro mukati mezviruva zvekumusoro zvekamuri sezviri pamusoro uye sarudza "show apps screen screen". Pano unogona kuibatidza kana kudzima.
Swipe kuratidza kana kuvanza mapurogiramu eapp: Sezvo pamusoro, iyo Galaxy S21 inoita kuti iwe utarise iwo maappuro tray neswipe kumusoro. Iwo maapplication mapeji pachawo anotenderera kuruboshwe uye kurudyi. Kana iwe uchida kudzokera kune peji remba, haufanire kudzvanya bhatani repamba, unogona kungo tsvaira kumusoro zvakare uye iyo tireyi tireyi inonyangarika.
Alphabetise kana tsika kurongedza maapplication ako: Mune maapplication tray, rova ​​menyu mune yepamusoro kurudyi-kona, wozo "sarudza". Izvi zvinokupa iwe sarudzo yekuti uve nerufabheti. Ingo tora iyo sarudzo uye zvese zvinowira munzvimbo. Kana kurova bhatani remenu mukona yepamusoro-kurudyi, wobva wadzvanya "ronga". Panguva ino, sarudza "tsika yakarongeka". Iwe unogona ikozvino unogona kudhonza maapplication kuenda kunzvimbo yaunoda ivo vari.
Tsvaga runhare rwako rwese neRitsva: Pamusoro pechirongwa cheapps pane bhaa yekutsvaga ye Finder. Izvi zvinodzosera mitsva yekutsvaga yeapps iwe yawakaisa, asi zvakare inogona kutsvaga zvemukati mumaapp, seNetflix, Play Store, mameseji, chiyeuchidzo, karenda uye zvimwe zvakawanda. Tinya iyo Finder bhaa mune maapplication tireyi, wobva warova bhatani remenu kurudyi ipapo unogona kusarudza kwayinotsvaga.
Chinja chisarudzika Android inokutendera iwe kuti usarudze kuti ndeipi default app kana iwe uine zvinopfuura chimwe chete zvichaita zvakafanana chinhu. Pasi pemagadziriso> maapplication, wobva "sarudza default maapplication". Pano iwe unogona kuona izvo zvasarudzwa seye default browser, kufona app, mameseji app uye yekumba skrini. Zvimwe zvinokanganisa zvinosarudzwa neapp yekutanga yaunovhura kune rimwe basa.
Samsung Galaxy S21 yekukiya skrini uye inogara ichiratidzwa
Shandura maitiro anogara achiwachi: Kune akati wandei emhando dzakasiyana mawachi eS21 inogara iri-inoratidzwa. Musoro muzvirongwa> lock screen> wachi wachi. Pano iwe unogona kushandura iyo wachi zvese zvekugara-pane kuratidzwa uye yekukiya skrini. Iwe unogona zvakare kushandura iwo mavara, saka kana iwe usiri kuda mono, unogona kusarudza chimwe chinhu.
Wedzera majeti kune yako yekukiya skrini kana inogara-pane inoratidzwa: Samsung inokuregedza iwe uine majeti pane yako yekukiya skrini kana inogara-pane inoratidzwa. Iwe unenge uine mutyairi wemimhanzi ipapo nekumisikidza, asi kana ukasadaro, tungamira mumasetingi> kukiya skrini> FaceWidgets. Pano iwe unowana dzese sarudzo dzekubatidza uye kudzima, kusanganisira Bixby Maitiro, mamiriro ekunze, maalarm uye mashedhiyo.
Samsung Galaxy S21 yakatevedzana kuchengeteka uye kuvhura
Samsung inopa huwandu hwesarudzo dzekuvhura.
Smart Lock / Bluetooth kuvhura: Zvekare muzvirongwa> zvechizarira screen> pane iyo Smart Lock chikamu. Ichi chiyereso cheiyo Android ficha uye iwe une sarudzo yekusarudza maturusi akavimbika, saka yako Android ichavhura kana yakabatana nechimwe chinhu. Iwe unogona kusarudza madhiraivhu eBluetooth (senge smartwatch yako kana mota), nzvimbo, izwi rakavimbika uye zvichingodaro.
Samsung Galaxy S21 kuratidza matipi
Samsung yava parudzi rwechitatu rweInfinity-O inoratidzira uye paGreen S21 nhepfenyuro pane izvozvi zvinochinja mitengo yekuvandudza.
Pinda 120Hz maitiro: Pane maviri ekuratidzira modes - adaptive kutsetseka kana yakajairika kutsetseka. Iyo standand modhi inonamira ku60Hz, iyo inochinja kutsetseka inosarudza iyo yakakodzera zororo reti inosvika ku120Hz. Kune iyo S20 uye S21 +, iyo renji iri 48-120Hz, kune iyo S21 Ultra iyo renji iri 10-120Hz. Kukurumidza kuzorodza kunoreva kutaridzika nekukurumidza kutamisa kunoonekwa, asi kunogona kushandisa bhatiri rakawanda. Iko kunakirwa kwekugadzirisa ndeyekuti ichagadzirisa iro bhatiri kudiwa kwako. Iwe unogona kuwana izvo zvingasarudzwa muzvirongwa> kuratidza> kufamba kwakanaka.
Shandura iyo resolution resolution: Iyo chete Galaxy S21 Ultra ine sarudzo yekuchinja resolution sezvo iyo S21 uye S21 + inongogumira kune yakazara HD + nguva dzese. Musoro muzvirongwa> kuratidza> resolution yegirazi uye iwe uchawana sarudzo yeHD +, Yakazara HD + kana WQHD + pane iyo S21 Ultra.
Shandura mavara ekuratidzira: Musoro muzvirongwa> screen mode uye iwe unowana iyo sarudzo yekuchinja maitiro anotaridzika. Iko kusarudzika kwakajeka nesarudzo yekuita kuti ive yakasikwa. Mukati meyakajeka iwe unogona kuchinja chena chiyero uye iyo RGB marongero, kana iwe uchida.
Vhura vhidhiyo inowedzera: Pane vhidhiyo inosimudzira yakavanda paS21 iyo ine chinangwa chekusimudzira mavhidhiyo. Inoshanda neakawanda maapplication, anosanganisira Netflix, Play Mafirimu, Prime Vhidhiyo uye YouTube. Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> vhidhiyo yekuwedzera kuti uibvise kana kuvhara zvinoenderana nezvaunoda.
Vhura ziso kunyaradza nhovo: Izvi zvinoshandura ruvara rwechiratidziro kudzikisa mwenje webhuruu, kudzivirira kunetseka kwemaziso uye kukubatsira iwe kurara zvirinani, notionally. Musoro muzvirongwa> kuratidza> ziso nyaradzo nhoo uye iwe unowana sarudzo dzeanoshanduka kana echinyakare modes. Iwe unogona kusarudza kuve nazvo nguva dzese uye kugadzirisa kune mamiriro, kana kuuya pane imwe nguva.
Mashandisiro ekushandisa iyo S Pen neiyo S21 Ultra: Iyo S21 Ultra ikozvino inotsigira iyo S Pen. Nepo paine bespoke S Peni iwe yaunogona kutenga, iyo zvakare inotsigira mamwe anoenderana S Pen zvishandiso. Iwe unonyatso rishandisa sechinyoreso kuti udyidzane nechiratidziro. Pamhedzisiro mhedzisiro shandisa iyo Samsung manotsi app kugadzira zvinyorwa zvakanyorwa, kana kuishandisa muIgalari app yekunyatso kugadzirisa vhidhiyo.
Samsung Galaxy S21 akateedzana notices matipi uye manomano
Samsung inowanzo gadziridza zvese kuziviswa nezwi rayo uye kudedera, saka pane zvakawanda zvekutora kuti zviitwe kuti uwane pamusoro pezviziviso. Isu takafukidza zvimwe zviziviso mune yekuvharira chikamu chikamu pamusoro, asi aya ndiwo maitiro ekubata pane ese iwo mabheepi uye mabhuru.
Kudzima zviziviso zveapuro: Endai kumasethingi> zviziviso uye muchaona "ichangotumirwa" chikamu. Tinya "zvimwe" uye iwe unowana zviri nyore kuchinja sarudzo dzese maappafoni pafoni yako. Pano unogona kuvavhara zvachose, kana kubaya kuti udzore mamwe ma ziviso.
Ratidza mabheji eiyo icon yeApp: Icon mabheji chinhu cheApple, ichirega yega yega app ichikuratidza kuti mangani ma ziviso aunazvo. Samsung inoisa izvi pane chishandiso chose. Musoro muzvirongwa> notices> advanced advanced settings> app icon badges. Unogona kushandura kana kudzima sarudzo, kana kuti tapira kuti uchinje maitiro (nhamba kana nhamba dzisina). Kana iwe ukabaya pane app pachinzvimbo, unogona kudzima madhivi eimwe chaiyo app.
Samsung Galaxy S21 vhoriyamu inodzora, inonzwika uye usakanganise
Kudzidza kugona kusakanganisa hunyanzvi hwekushandisa hweApple. Unogona kuiwana kuti ikupe zviyeuchidzo zvaunoda paunenge uchizvida, unogona kunyararidza foni yako kana iwe uchida usingade chinomira chinotsvedza, asi zvakadaro rega izvo zviyeuchidzo zvakakosha kuburikidza. Pane iyo Galaxy S21 iwe une ina vhoriyamu inotsvedza: system, ringtone, midhiya, zviziviso.
Tenzi midhiya vhorumu tendeuka: Mukati megadziriro evhoriyamu (marongero> manzwi uye kudedera> vhoriyamu) iwe unowana iyo sarudzo yekushandisa vhoriyamu makiyi enhau Izvi zviripo nekutadza uye zvinoreva kuti kana iwe ukadzvanya mabhatani evhoriyamu, chete midhiya vhoriyamu inofamba, senge mimhanzi yako. Dzima iyo uye inodzora ringer vhoriyamu, asi inoshandura kune midhiya vhoriyamu kana iwe uine midhiya inotamba, semuenzaniso muNetflix kana Spotify.
Shongedza ruzha rwemhando yacho kwauri: Unogona kugadzirisa kurira kwekuburitsa kubva kumidziyo yeS21. Musoro muzvirongwa> manzwi uye kudedera> ruzha mhando uye mhedzisiro uye iwe uchaona "chinja ruzha" pasi kuti pasi. Unogona kutora zera-rakavakirwa mbiri kana iwe unogona kugadzira yakasarudzika marongero zvichienderana nekfupi yekuteerera bvunzo.
Bvumira maaramu uye kunze mune usakanganise: Kana iwe uchida kunyarara saka usakanganisa zvakanaka. Asi kana iwe uchida zvimwe zviziviso, saka unofanirwa kudoma maappsthat anotenderwa. Musoro muzvirongwa> kurira uye kudedera> usakanganise uye iwe uchaona chikamu chekusiiwa. Pano iwe unogona kubvumira maalarm (akakosha kana iwe uchida kumuka mangwanani), asi zvakare tendera vanodzokorora vafona kana vakadomwa meseji - senge vanofarira meseji uye mafoni - pamwe nezviyeuchidzo. Iwe unogona zvakare kuwedzera maapplication ekuregeredza usakanganisa - saka kana iwe uchigara uchida yako yakabatana bhero repamusuwo kuti ikuyese iwe, iwe unozogona kugonesa iyo app pano.
Bvumira zviziviso mukati kuti zvisakanganise: Nepo ruzha uye kudengenyeka zvanyararwa mukati hazvivhiringidze, iwe unogona kunge uine ziviso dzakanyarara. Mune masetingi> kurira uye kudedera> usakanganisa> kuvanza zviziviso iwe unowana sarudzo dzekubvumidza kana kumisa zviziviso. Viga zvese hazvireve kuti hapana chinoonekwa, asi iwe sarudza - iwe unogona kudzima mabheji emifananidzo, iyo ziviso rondedzero, pop-ups uye mamiriro ebar bar.
Matipi emutambo anokurudzira
Kubhejera ndeimwe yepamusoro yekushandisa mafoni, saka kuziva sarudzo kunobatsira chaizvo.
Deredza mwero wekuvandudza kuti uchengetedze bhatiri: Isu tinotaura muchikamu chekuratidzira maitiro ekushandura anozorodza, asi iwe unogona zvakare kudzora mwero wekuzorodza kusvika 48Hz kuchengetedza bhatiri mumitambo isingade kutsanya kuzorodza. Vhura iyo Game Launcher app uye tinya menyu bhatani kumusoro kuruboshwe. Rova "Game performance" kuti upinde marongero. Iwe unogona ipapo kushandura pa "yakaderera zororo mwero".
Bvisa kufamba kwemasaini mumitambo: Ichi chiito chikuru chekumisa iwe netsaona uchisiya mutambo paunenge uchitamba nekuti ma swipe ako aishandurwa zvisizvo. Enda kumutambo wekusimudzira marongero sezvakatsanangurwa pamusoro, wobva wasarudza "block panguva yemutambo". Pano unogona kuchinja mafambisirwo ekufamba. Kuti ubude mutambo uchafanirwa kutsvaira kaviri.
Vhura Dolby Atmos yekutamba: Chimwe chiitiko chefoni ndiAtmos uye unogona kuitisa mutambo. Musoro muzvirongwa> kurira uye kudedera> mhando yemhere uye mhedzisiro uye iwe uchaona sarudzo yeAtmos mumitambo.
Mashandisiro ekushandisa iyo screenrecorder: Pane yakavakirwa-mukati rekodhi rekodhi paS21 uye iwe unogona kuwana izvi kuburikidza nekukurumidza maseteni. Ingo shandura pasi uye iwe unogona kuibatidza, uine sarudzo yekurekodha isina ruzha, midhiya kurira kana midhiya kurira uye mic. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchangoita zvinomushandira, unowana zvinodzora pa - screen, izvo zvinogona kudzikisirwa kudivi kuti vasapinda munzira yemutambo wako
Samsung Galaxy S21 kamera uye mapikicha emifananidzo
Iwo makamera ari paS21 uye S21 + akasiyana zvakanyanya kune iyo S21 Ultra - asi pane zvakawanda zvavakafanana uye zvakawanda kuti vabate.
Shandisa iyo 108MP modhi (S21 Ultra chete): Iyo S21 Ultra ine 108-megapixel kamera, asi nekumisikidza yakagadzirirwa 12-megapixels. Kana iwe uchida iyo yakazara resolution, tinya iyo factor ratio bhatani mune iyo yekuona uye iwe uchaona iyo "4: 3 108MP" sarudzo.
Batidza 64MP modhi (S21, S21 + chete): Iwo asiri-Ultra mamodheru anogona zvakare kupfura pakakwirira resolution uchishandisa iyo 64-megapixel sensor. Sezvakataurwa pamusoro, kubva kukamera, tinya bhatani rezvikamu uye iwe uchaona "4: 3 64MP" sarudzo.
Vhura 8K vhidhiyo yekutorwa: Kana iwe uchida kutora vhidhiyo mukugadziriswa kwepamusoro, tungamira mumavhidhiyo modhi uye tinya iyo icon ratio - iwe uchaona sarudzo ye8K 24. Iwe unorasikirwa nezvimwe maficha pane ichi resolution, sezvo pasina kudzikama semuenzaniso.
Vheneka maitiro ekupfura: Chinhu chakaunzwa paS10, chichaongorora chiitiko uye nekuratidzira kurongeka kwakanyanya. Iyo kamera inoratidzira yakanakisa kupfura iwe yaunogona kutora uye nekukubatsira iwe kuimisa iyo kumusoro uchishandisa gwara pane iyo skrini. Vhura kamera uye tora iyo yekugadzika cog uye iwe unowana sarudzo yekutendeuka.
Shandisa chiitiko chinogadzirisa mifananidzo yako: Chiitiko optimiser inoshandisa AI kunatsiridza ako mapikicha, pamwe nekubvumidza yakareba yakabata ruoko mapikicha. Mune iyo yekutsvaga muiyo kamera app iwe uchaona swirly icon mune imwe kona. Kana iri yebhuruu ipapo optimiser yemwenje yakavhurwa uye inozoona iyo mamiriro uye inosarudza akanakisa marongero ako. Kana pasina chiratidzo cheswivly, tungamira mumamera macamera uye shandura pane optimiser yechiitiko. Iwe zvakare unowana sarudzo yekutora mashandiro ayo muchikamu chimwe chete.
Shandisa usiku maitiro ezvepamusoro mwenje wepazasi shoti: Tungamira mumitambo yekupfura uye pombi nzira yemanheru. Paunenge uchipfura mumwenje wakadzika, chengetedza kamera kuti igadzikane sezvinobvira, kusvikira mwedzi mudiki mubhatani re shutter wazadzwa yero. Inoshanda pane ese kumberi uye kumashure kamera.
Shandisa Imwe Kutora yezvidzidzo zvinofamba: Kana iwe uri kutarisa chimwe chinhu chinonakidza chiri kufamba-famba, semunhu anoita mumugwagwa kana imbwa yako, Imwe chete Tora inogona kutora yakatarwa mifananidzo uye vhidhiyo yako uye wozokupa iwe nevhidhiyo, zvinoratidzwa uye ese ese mamwe mapfuti.
Rongedza nzira dziripo kamera: Haufanire kunamatira pane zvakasarudzika sarudzo pamusoro - iwe unogona kuwedzera kana kubvisa nzira dzaunowana dzichinyanya kubatsira. Musoro mu "zvimwe" uye iwe uchaona a + Inoonekwa kumagumo eiyo runyorwa. Tinya izvo uye zvinokutendera iwe kudhonza iwo ma modhi aunoda pane iyo runyorwa, kuti iwe ugone kuvasarudza zviri nyore pasina kuvhura iyo "yakawanda" menyu nguva dzese.
Gonesa kuburitsa kwakabikwa: Kana iwe uchida iyo dng mafaera akachengetedzwa pamwe neyakajairwa jpeg, tungamira mukati mezvisarudzo> chengetedza sarudzo. Heino sarudzo yekuchengetedza ese ari maviri uye jpeg mafaera. Kuti uishandise iwe unofanirwa kuve uri muPro modhi, zvisinei, saka kana iwe uchida mbishi mafaera, batidza iyo uye kupfura muPro.
Ita kuti vhidhiyo isimbe: Iko kune mairi mairi maturo ekudzikama, imwe mumakamera masetingi ayo anoita kunge anoshanda kune zvese, kana "Super Yakadzikama", iyo inonyanya kushamisa. Ingo tora iyo icon kuruboshwe neruoko uye wiggly mitsara kuvhura Super Yakadzikama. Yero kana yakavhurwa, asi iwe unogona chete kuva neFHD 30 kana makumi matanhatu emavhidhiyo sarudzo pane yekumashure kamera. Iyi ndiyo nzira iyo inokutendera iwe kufamba-famba uye kuwana kutsetseka mapani, asi inogumira mune hunhu iwe hwaunogona kutora mukati.
Kupfura muHDR10 + vhidhiyo: HDR10 + ndeye beta (kana "labs") chimiro. Tungamira mumavhidhiyo modhi uye wozovhura macamera makamera> epamberi ekurekodha mabasa. Unogona kuchinja paHDR10 +, asi yambiro kuti unogona kungoona avo vari paHDR10 + inowirirana, kana zvisina kudaro vanongoita kunge vhidhiyo yemhando yepasi. Iwe unogona zvakare kutora HDR10 + pa1080 / 30p, kwete iyo yakazara renji yezvisarudzo zvinopihwa nekamera uye iwe unogona kungoidzima kana uri mune iwo marongero. Unogona kushandisa iyo Garari kushandura iyo vhidhiyo kana iwe uchida kugovana nevamwe isingatsigire HDR10 +.
Tora mufananidzo we selfie: Ingo chinja kumberi kamera uye sarudza mufananidzo kubva kumenyu. Pane zvinomwe zvakasiyana mhedzisiro uye mamiriro ekuyedza. Ziva kuti kutsetseka kweganda kunovhenekerwa nekukanganisa, saka tora iyo wand icon kana iwe uchida kuita shanduko.
Samsung Galaxy S21 kumucheto kwetimuti matipi
Edge skrini yaifanirwa kugadzira mativi akakombama achinyanyobatsira - asi nepo iyo S21 uye S21 + iine mafirati ekuratidzira, ivo vachiri kupa mashandiro!
Wedzera kana bvisa pamucheto mapaneru: Musoro muzvirongwa> kuratidza> pamupendero mapaneru. Tinya pane mapaneru uye iwe uchaona kusarudzwa kwemapaneli aripo uye iwe unogona kuwedzera uye kubvisa iwo ausingade. Namatira kune zvinobatsira, zvikasadaro iwe uchapedza yakawanda nguva uchifamba uye shoma nguva uchiita. Smart sarudza yakakodzera kuongorora.
Fambisa mupendero wedanga remupendero kune chero kwaunoda: Unogona kufambisa mupendero mubato (kwaunofanirwa kuswipe kuti uvhure iwo mapaneru) kune chero kuruboshwe kana kurudyi rwechidzitiro. Ingodzvanya uye bata uye unogona kuidhonza kwaunoda. Kana iwe usiri kuda kukwanisa kuifambisa, unogona kukiya chinzvimbo mumasetingi, sezasi.
Shandura ukuru uye pachena kwema mupendero paneleti mubato: Musoro muzvirongwa> kuratidza> pamupendero mapaneru> mubato. Mukati meaya marongero unogona kushandura mubato - kusanganisira kuuita usingaonekwe, kushandura ruvara, saizi uye kana iwe uchida kuti uteteme kana wabatwa.
Dzima kumucheto chidzitiro: Musoro muzvirongwa> kuratidza> pamupendero wepaneru uye bvisa pamucheto mapaneru. Ivo vanozoendeswa kune bhakiti remabasa iwe rausingamboshandisa.
Samsung Galaxy S21 uye S21 + skrini
Samsung Galaxy S21 bhatiri matipi
Heano maitiro ekuwana zvakanakisa kubva kubhatiri pane iyo Galaxy S21 mamodheru.
Dzikisa kupenya kwekuratidzira: Hazvishamise kuti kupenya kwechiratidziro ndechimwe chevashandisi vakuru bhatiri.
Chinja kuzere HD + (S21 Ultra chete): Iyo ndiyo yekumisikidza kuseta kwefoni dzeSamsung kwechikonzero - nekuti resolution dzakakwira dzinodya hupenyu hwakawanda hwebhatiri. Zvekare, iwo mirairo iri pamusoro, asi musoro kumaseteni> kuratidza uye iwe uchawana sarudzo.
Wona zviri kudya bhatiri: Musoro muzvirongwa> bhatiri uye chengetedzo uye pombi bhatiri. Izvi zvinokuratidza iyo yakafanotaurwa bhatiri kushandiswa kunoenderana neyako 7-zuva mavhareji, uye nekukata iyo "bhatiri yekushandisa" ichakuratidza iwe chii chiri kushandisa kumusoro iro bhatiri.
Shandisa simba rekuchengetedza simba: Chero rova ​​nzira ipfupi mukumisikidza nekukurumidza, kana musoro muzvirongwa> bhatiri nekuchengetedza mudziyo> bhatiri. Pano iwe unogona kuvhura magetsi ekuchengetedza modhi, uine dzimwe sarudzo yezviito zvipi zvinotorwa kuchengetedza bhatiri rako.
Shandisa Wireless PowerShare: Iyo Samsung Galaxy S21 inogona kudzosera kubhadharisa zvisina waya. Pane yekumhanyisa marongero ekuchinja ebasa iro rinorega iwe ubhadhare chimwe chishandiso kana iwe uchichiisa ivo kumashure. Ingo bata bhatani uye wozoisa chimwe chigadzirwa kumashure kweGPS S21 ive iyo Samsung Buds Pro, iyo iPhone, kana chero chimwe chigadzirwa cheQi.